A ọkụ ọkụ na ọrụ ebube na mbụ njem na Chile - 1aviagem.com
Gara aga post: Ndụmọdụ ndị dị na Berlin - Germany - nlegharị anya 10
Nkwupụta na-esote: Niagara Falls vs Foz do Iguaçu kedu kacha asọ asọ mmiri?
Edebere 20 March 2019 1 comment site Römulo Lucena
Ụbọchị ndị a, enwere m obi nkoropụ, ma ọ bụ n'ihi ihe ndị ọhụrụ ọhụụ ma ọ bụ ndị mmadụ na ezinụlọ m. Ihe ndị a bụ ajụjụ n'etiti diagnoses na ọrịa ndị na-achọ ọtụtụ okwukwe anyị. Nke ahụ chọrọ ịkwaga Chineke.
N'ihi ya, m kpebiri ide banyere ọrụ ebube na njem. Ihe mere n'oge mbụ njem na Chile.
M ga-agbalịa ịkọ akụkọ dị mkpirikpi, ma ọ bụrụ na enweghi mfu nke ihe mere ị ga-eji kọwaa nke a dị ka ọrụ ebube.
Otu esi malite
Na 2010 m gara Chile, ihe a bụ ịga Santiago wee si Santiago gaa Puerto Montt ma ọ bụ Puerto Varas, gafee Andes ma gaa Argentina (Bariloche). M ga-agarịrị ebe ahụ. Karịsịa mgbe ezigbo enyi m Rebecca, ị nwere ike ịgwa m na e nwere ọkụ na-agba ọkụ n'ebe ahụ ileta ndị njem nleta. Agatụghị m eleta ugwu mgbawa tupu mgbe ahụ, m wee nweta echiche nke ime ya! Enweelarị m akwụkwọ akụkọ ahụ, ma Rebecca, bụ nwa agbọghọ nwere onyinye a mara? Iji mee ka ndị mmadụ kwenye. Anọ m na njem dum MADE, ihe nkiri, ụlọ oriri wdg. Mgbe ọ na-abịa, dịka a ga - asị na ọ chọghị ihe ọ bụla, ma kwuo,
"Oh, Rômulinho, ị na-aga, gịnị kpatara na ị gaghị etinye aka na mpaghara Great Lakes? Ha na-ekwu na enwere ugwu ọkụ na-agba ọkụ n'ebe ị nwere ike ịga, na ikike ịrịgo na ihe ọ bụla ọzọ! Enweghị m, mana m ga-achọ ịga. "
Ah! Enwere m echiche ahụ! O doro anya na m megharịrị okporo ụzọ ahụ ma mechara mara obodo 7 karịa 3 na Chile. Nani na oge nleta ga-adị ntakịrị! Edere m 4 ụbọchị ka m nwee ike ịga leta ugwu Osorno mgbawa ahụ. (Ma ọ dị mma) Nke ahụ pụtara 4 ga-enwe ụbọchị iji gbalịa ịrịgo ma hụ ugwu mgbago nso.
Mmiri, oyi na mmiri ozuzo
Na Santiago, ihe niile gara nke ọma ma dị jụụ. (n'ọdịnihu m ga-eziga banyere isi obodo Chile) Ma ka o juru m anya, Puerto Montt, Puerto Varas na Enseneada nọ na mmiri ozuzo! Na ịchọta oyi oyi. nke 10 ° C ka efu).
Na otu esi zoo oke otutu n'oge ahu ...
Anọ m n'ụlọ nkwari akụ dị nso n'otu ụlọ ahịa na Puerto Montt. Ma, ebe a bụ ọnụ, ọ bụrụ na ị gaa, ana m akwado ịlele maka ohere na Puerto Varas. Ọ bụ njem nlegharị anya. Ọfọn, ka na Puerto Montt n'ámá, n'oge mmiri ozuzo, enwere m ike ịchọta Kike, bụ onye nduzi nleta. Ma n'oge ahụ erubebeghị ụgwọ ndị nduzi nleta, nyere nsogbu nke ịchọta ịntanetị n'oge ahụ. M hapụrụ ọrụ na saịtị tupu ị gaa ugwu mgbawa. Ya mere, m goro ya.
Ọ gafeere m ụfọdụ ederede wee gwa m: Lee mmiri ozuzo na-ezo ọtụtụ oge na afọ a, ọ naghị ahụ anya ma ọ bụ kwere ka ugwu ugwu ahụ ghara ịhụ ya. Maka ebe a mgbe mmiri ozuzo 7 na-agafe ụbọchị ruo n'ọhụụ ruo mgbe ígwé ojii na-ebili ntakịrị na ọ ga-ekwe omume ịhụ ugwu mgbawa. Malite ụnyaahụ ụnyaahụ a.
Ọ bụ n'ụzọ nkịtị "mmiri mmiri oyi" na obi ụtọ. Ọ dị nro? Echefuru m ilele ihu igwe. Echere m onwe m site n'ekpere Chineke: Chineke, gị onye na-achị ihe niile, na-achịkwa ihu igwe na mmiri ozuzo, na iziga anyanwụ kwa ụtụtụ. Biko ekwela ka nwatakiri gi gaa n'enweghi mmetụta ahu na ozi ahu mezue ... ekwenyeghi m na Onyenwe anyi agaghi enwe obi ebere n'ebe m no. M si Brazil bịa ugbu a, ekwela ka m hụ naanị ihe isi awọ niile! Jehova bu Chineke nke ihe nile, biko biko, mepee anyanwu? Gosi ebube gị, meghere mepee, mepee ...
Volcano na mmiri ozuzo
Na n'ime ụbọchị ndị a, 2 na-akara akara ngosi na na tiori ga-enye ọ dịkarịa ala ịhụ Osorno mgbawa, n'enweghị ígwé ojii, agaghị enye ịrịgo. Echiche bụ ma ọ bụrụ na ọnọdụ ahụ dịkwuo mma na ihe ize ndụ nke ịrị elu ugwu mgbawa ahụ dabere na m nwere ike ime nke ahụ.
N'ụbọchị mbụ, ọ dịghị mgbanwe, Na maka nchekwa, anyị gara iyi mmiri dị ọkụ.
Chee ihu na 8 oyi na mmiri ozuzo ...
Mmetụta ahụ bụ ịmị mmiri n'ime ngwa nju oyi!
Iji gbochie oyi, anyị kwụsịrị n'ime mmiri dị ọkụ na-ekpo ọkụ ozugbo site na ugwu mgbawa ...
Na-ekwu banyere ugwu mgbawa
O doro anya na m ekwughị na mpaghara mpaghara ọdọ mmiri dị n'etiti Chile na Argentina, e nwere ugwu mgbawa anọ dị nso, ọ bụghị otu dịka m chere.
Egwurugwu dị nso bụ: Cabulco, Osorno na Puntiagudo. Edere uhie na onu ogugu n'okpuru. Ndị a dị n'akụkụ Chile. Na ugwu ugwu Tronador bụ nke dị na Chile na Argentina, nke bụ onye agbata obi ya.
A na - akpọ oke ọdọ mmiri ndị dị na mpaghara: Rupanco, Llanquehue, Petrohue, Chapo na n'ikpeazụ Estero Reloncaví ọdọ.
Mpaghara mgbawa na Chile
Mmiri miri na-ekpo ọkụ site na mgbawa ugwu nke mpaghara ahụ na gburugburu 40. N'ime ebe a. Enweghị m ọbụna ikwu na mmetụta nke ice maka okpomọkụ dị nnọọ jụụ! Mmiri ọkụ na oyi ahụ! Na ichota isi iyi di egwu m mere vidiyo.
Echere m na igwefoto nwere ike ịjụ oyi na naanị ọrụ ọrụ bụ ndekọ nke vidiyo. Ihe m na-atụghị anya ya bụ na onye ndu nke Kike ga-enweta ụzọ na vidiyo ga-emesị ghọọ "mkparịta ụka na onye nduzi nleta ahụ!
Soro njikọ ka ịlele ya n'onwe gị. (nakwa na youtube):
Amaara m, ọ na-ewute m nke ukwuu na vidiyo ahụ, ma nye m ego ịgafe ego! lol Ọ bụ njem mbụ m gaa mba na-asụ Spanish (m na-asụkwa Portuguese) n'enweghi ihe mmụta Spanish n'oge gara aga! Ruo mgbe m dị mma, ọ bụ eziokwu!
Kedu. N'echi ya, edere m ọzọ ka m hụ Osorno. M wee malite ịrịọ Chineke n'egbughị oge! Chineke si n'elu-igwe, chigharia n'igwe-oji! Biko! Mụ na Kike kwurịtara okwu. M kwuru, sị: Taa, anyị ga-ahụ Osorno !! (obi tọrọ m ụtọ!) Ọ gwakwara m:
"Ma taa bụ ụbọchị nke atọ, ị gaghị ahụ ugwu mgbawa ..."
M kwuru, ọ dịghị mkpa taa ọ ga-emeghe anyanwụ mgbe anyị na-abata ebe ahụ! Anyị nwere okwukwe!
Ọ chịrị ọchị ma na-akwa emo ... Ọ gwara Van ndị ọzọ.
"N'ebe a, anyị nwere onye Brazil nke kwuru na anyị ga-ahụ ugwu mgbawa taa, ma ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume, ọ ga-afụ ma na-efe ígwé ojii dị nnọọ anya, ya mere, anyị nile nwere ike ịhụ Osorno mgbawa!
NA Onye ọ bụla na-adịghị mma !!
M wee gaa n'okporo ụzọ na-agwa Chineke okwu. sị:
"Chineke nọnyeere gi ugbua, oburu na i me, m'gēme ka aha gi di nma, oburu na gi adigh ... nke oma, gi g'abu amara n'arum. M ga-abụkwa onye kwere ekwe ọzọ na-agaghị ekwe omume. "
Mmiri wee zoo. ụfọdụ ndị Chile nọ na van ahụ nọ na-asị, "Ọ bụ ihe ihere na ọ si Brazil bịa ebe a, ma eleghị anya ọ gaghị enwe ike ịhụ Osorno."
Ka o sina dị, anyị rutere! Mmiri wee malite ịdọrọ ... dị ka a ga-asị na ọ bụ ákwà mgbochi nke ji nwayọọ nwayọọ bilie ... na ígwé ojii na-apụta!
Ndien ke akpatre, mmiri ozuzo ahụ gbaghaara! Gịnị si na ya pụta? na-esote onyinyo kacha mma nke Chile nile!
Mgbe m laghachiri Van, agwara m Kike, "Lee! Naanị ị ghaghị inwe okwukwe! Ma ndị ọzọ kwa!
Leenụ otú okwukwe si eme ka ugwu dị elu! Na nke a, mmiri ozuzo na igwe ojii! Ọ bụghị ọbụna ime ka obi onye Brazil nke jupụtara n'okwukwe nwee obi ụtọ! (N'okwu a na-agagharị n'ugwu, na-eche na anọ n'ime ha bụ ugwu mgbawa, agaghị abụ ezi echiche. N'ihi ya, ọ kachasị mma ịkwaga mmiri ozuzo na igwe ojii.
Na ụbọchị ikpeazụ, agaghachiri m Osorno, ihu igwe na-adịgide adịgide ma kpebiri m ịrị. Emechi nchedo nyere, bia.
Na ... Egwu, mmetụta nke ịnọ n'elu ugwu mgbawa, nke dị n'akụkụ mmiri dị n'akụkụ igwe ojii bụ ihe na-akpali akpali!
Lee site na nzuko Osorno
Na iji mezuo njem ahụ, ọ ka nwere ike ịchọta eriri zip.
Ha bụ 1.600 mita elu na eriri zipụ. Ihe na-agbalị ịkọwa okwu ...
Nzuzo na afọ + elu oyi + nnwere onwe + mara mma echiche = sensọ.
O di nwute na ọ gaghị ekwe omume idekọ.
Naanị foto a ka a hapụrụ tupu ọdịda ahụ.
Oh na maka onye ọrụ van na-echegbu onwe ya banyere Brazil a na-enweghị ike ịhụ Osorno, n'ikpeazu ha ka na-eto otuto a nke okwukwe. Onye ọ bụla gọziri site na mma mara nke ogige ahụ na ugwu ugwu. Ọ bụghị onye ọ bụla na-arịgo, mana anyị ji n'aka na anyị ga-alaghachi na ụlọ na ọtụtụ akụkọ ihe mere eme na ahụmahụ ọzọ na ndụ.
Nri ehihie na ndị ọrụ van
Obi ụtọ na Van
Na ọnụ maka onye ọ bụla chọrọ ịga ma ọ bụ gbadaa ugwu mgbawa na-enweghị nnukwu ọzụzụ ọzụzụ ahụ, dị ka ịrịgo glace. Site n'ụkwụ gị, e nwere igwe ụgbọ ala. M na-arịgo ma echere m na ọ bara uru. Na-azoputa otutu ike na oge. N'ezie, ọ bụrụ na ị na-atụ egwu ịdị elu ma ọ bụ vertigo adịghị atụ aro ya. Ma ịrị elu ụgbọ ala dị mfe. Onye ọ bụla nwere ike ime ya n'oge dị mma. Ma ọ bụ na ị na-eti egwu nke elu, ma ọ bụ na ị ga-etinye obere calorie ọzọ na-arịgo na ice na ụkwụ. Nke ahụ bụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ileta elu nke ugwu mgbawa.
Ụgbọ ala ụgbọ elu,
Ndụ dị ka nke ahụ, onye nwere okwukwe ma na-ejegharị na Chineke, na-ahụ ọrụ ebube, ndị na-eje ije n'enweghị okwukwe ... enweghị echiche na ahụmahụ mara mma dị otú ahụ, n'enweghị akụkọ ịkọ.
Ya mere nwere obere okwukwe na ndụ a.
Na nchịkọta a pụrụ ịkọ akụkọ a na ihe ngosi 6:
Icheta ọgbụgba ndụ ahụ na Chineke
Volcano na-enweghị mmiri ozuzo
Ruo mgbe ọzọ. (I.e.
akụkọ ihe mere eme Cabulco Chile okwukwe ọrụ ebube Osorno Tronador Volcano
March 22 si na 2019 gaa 20: 14